Zvemotokari Upholstery yeganda fekitari, vatengi - China Zvigadzirwa zvemotokari Upholstery vagadziri
Ine abrasion kuramba, kutonhora kuramba, kufema, kukwegura kuramba, uye zvakapfava magadzirirwo. , Kudzivirirwa kwezvakatipoteredza uye kutaridzika kwakanaka, ndiyo sarudzo yakanakisa kutsiva ganda rechisikigo (yekutanga danga remombe), ikozvino mabhizinesi mazhinji achatengesa microfiber dehwe seyekutanga mombe yemombe pamitengo yakakwira.
0.6mm - 1.4mm Microfiber Synthetic Leather yeMotokari Upholstery Leather
1.2mm microfiber nedehwe remotokari, ine zvinyoro handfeel uye yakanaka surface.Light uremu, 30% wakareruka pane zvakasikwa dehwe, unosangana nechiedza uremu dhizaini zvinoda uye hupfumi hupfumi.
1mm Faux PVC Yakagadzirwa Leather Yakaroora kana Yakapetwa kaviri
Kuenzaniswa nemamwe matehwe, PVC yeganda iri nyore kupurasitiki uye zvirinani kuchenesa, kazhinji netowel yakanyorova kana yakanyorova bepa tauro. Mazhinji ePVC ematehwe akagadzirwa naBensen arimo, ndapota taura nesu kana uchida rumwe ruzivo kana sampuli.
Big Discounting China PVC Yakagadzirwa Leather yeMotokari Inogadzikana
PVC, ipfupi nePolyvinylchlorid, ine mamwe matanda pasi pekupfeka kwayo. Chinhu chayo chikuru ndeye polyvinyl chloride, uye zvimwe zvinowedzerwa kuti zviwedzere kupisa kwayo kupisa, kuomarara, ductility. PVC zvakare ine simba rakakwira uye kugadzikana kwakanyanya, uye haina kupisa, inogona kuramba shanduko yemamiriro ekunze yakaunza ngura uye zvimwe zviitiko. Icho chinhu chakanakisa kwazvo, nekuda kwekuchengetedza kwazvo, saka inogona kuonekwa kwese muhupenyu.Muhupenyu hwezuva nezuva, akasiyana zvigadzirwa zveganda zvinoonekwa kwese kwese, sekushongedza kwemukati, machira esofa, zvemukati zvemota, zvipfeko, shangu nemabhegi zvichingodaro. Zvigadzirwa zvematehwe izvo zvakafanana chaizvo zvakagadzirwa zveyakagadzirwa nedehwe
Kurema kwechiedza, 30% yakareruka pane yakasikwa dehwe, inosangana nehuremu huremu dhizaini dhizaini uye hupfumi hwehupfumi.
Kupisa Kutengesa Nhema Microfiber Suede Leather yeCar Steering Wheel
Microfiber suede dehwe inosanganisa zvakanakira dehwe nemachira, ichipidigura tsika yechinyakare yekuti dehwe rakakwirira pane zvese zviri mupfungwa dzevatengi, kududzira zvekare machira ekugadzira, kuunza mafambiro matsva ehunhu hwemhando yepamusoro, husina zvakatipoteredza.
Microfiber inogadzirwa nenylon yakanakisa faibha ine yakafanana mamiriro uye mashandiro kune yakasungwa collagen fiber mune yakasikwa dehwe, inogadzirwa isina-yakarukwa jira ine matatu-mativi maratidziro mamiriro, uyezve ndokuzadzwa ne polyurethane ine yakavhurika microporous chimiro.
Yakanaka Yemhando Suede Mucheka Tevedzera Microfiber Leather yeAuto
Microfiber suede inoumbwa ne polyamide, inongova chiuru chimwe chete chehupamhi hwebvudzi. Bensen anoshandisa chimiro ichi kuona kunyaradzwa uye kupfava kwesuede.